Tilmaamo qaar ka mid ah LXDE | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux, Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Lxde waa heer sare Deegaanka Desktop in sida inbadan oo naga mid ahi ogtahay, waxay na siineysaa astaamihiisa ugu weyn, adeegsiga ugu fiican ee kheyraadka qalabka yar yar ee qaarkeen wali heystaan.
In kasta oo desktop-kani uu kolba mid u kobcayo, oo ay ku jiraan barnaamijyadiisa iyo qalabkiisa qaabeynta, haddana had iyo jeer waa waxtar in la ogaado waxyaabo aan qaban karno "gacanta" marka aadan haysan shuruudaha saxda ah.
1 Codsiyada bilowga ah
2 Dejinta liiska.
4 Sanduuqa LXDM.
5 Xusuus-kicinta PCManFM
6 Kiiboodhka Caalamiga ah ee Ingiriisiga oo leh furayaal dhintay.
Codsiyada bilowga ah
Lxde Waxaad nooga baahan tahay inaan tilmaamno barnaamijyada ama waa inaad buuxisaa marka aad bilowdo casharka, tan awgeed waxay u adeegsaneysaa feyl guud oo ku yaal / iwm / xdg / lxsession / / dib u bilow.
Tusaale ahaan u soo qaado feylka soo galaya Linux Mint LXDE, oo ay tahay inay ku jiraan waxyaabaha soo socda:
Uma baahnin waxaas oo dhan marar badan, sidaa darteed waxaan uga tagi karnaa sidan:
Tan waxaan uga hortageynaa Lxde ku shub codsiyo gaar ah oo gaar ah Linux Mint in aynaan u baahan doonin, marka lagu daro Bluetooth, Maareeyaha Shabakadda, iyo kuwo kale.
Waxaan ku hagaajin karnaa cabirrada kale LxdeSi aan wax yar ula jaanqaadno baahiyaheenna, tusaale ahaan iyaga ayaa ah in wax laga beddelo meertada kal-fadhiga isticmaalaha si aysan u soo bandhigin qoraallo gaar ah oo aan la isticmaali doonin, ama lagu daro kuwa kale.
Nidaamkan ayaa aad looga fududeeyay Lxde, tan iyo markii lagu daro soo galitaan kasta ee menu-ka, kaliya waa inaan abuurnaa .desktop gudaha / usr / wadaag / codsiyo / oo si otomaatig ah ayaa loogu dari doonaa liiska. Sidoo kale, haddii aan rabno, waan baabi'in karnaa qaar .desktop inaynaan doonayn inay muuqato.
Waxaan sidoo kale ku saxi karnaa gacanta, annaga oo ku saxeyna feyl leh magac guud oo laga dhex abuuray galka .cache / menus /, tusaale ahaan magaca feylkaan wuxuu noqon karaa:
Hab kale wuxuu noqon lahaa in faylka wax laga beddelo /etc/xdg/menus/lxde-applications.menu halka aan ka saari karno qaybta kale (Kuwa kale) tusaale ahaan.
Lxde ku maaree desktop-ka PCManFM, maamule fayl aad ufiican oo ay kujiraan tabs oo si fudud, dhakhso iyo garasho leh. PCManFM ayaa mas'uul ka ah dejinta arjiga isticmaalaha, astaamaha, iyo waxyaabo kale.
Haddii sababo jira awgood aan loo soo saarin, waxaan u isticmaali karnaa amarka soo socda si aan u dhaqaajino:
Dhigista, dabcan, wadada meesha sawirku ku yaal.
Lxde waxaa ka mid ah maareeye kaligiis u gaar ah oo la yiraahdo LXDM. LXDM waa wax fudud oo aad loo habeyn karo. Qaar ka mid ah mowduucyada laga helay / usr / share / lxdm / mawduucyada / oo wax ka beddel si aad u abuurto mid kuu gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan kaliya dooneyno inaan bedelno sawirka asalka, waa inaan wax ka bedelnaa feylka /etc/lxdm/default.conf oo u daa sidan:
Waxaan kaliya u baahanahay inaan bedelno dariiqa sawirka ee xulashada BG oo dib u bilaw LXDM.
Muddo ka hor waxaan la kulmay dhibaatooyin qaar markii aan isku dayay inaan dhejiyo xusuusta flash-ka ama CD-ROM anigoo adeegsanaya
PCManFM. Midkani wuxuu i helay a pop-up isagoo leh, Lama Fasaxo.
Marka laga hadlayo ulaha USB, xalka aan markii hore helay wuxuu ahaa kuwan soo socda:
1.- Abuur gudaha / badh intaas oo fayl oo magac leh USB, USB1 iyo wixii la mid ah, waxay kuxirantahay tirada dekedaha USB-ga.
2.- Sida had iyo jeer aaladda ugu horreysa lagu rakibay sdb, Fayl baan ku daray / etc / fstab sadarka soo socda:
3.- Kadibna waxaan siiyay rukhsad waxaanan waydiiyay isticmaalaha su'aal sida milkiilaha faylladaas:
Laakiin sidaad fahmi doontid habkani waa xoogaa wasakh ah. Marka waxaan heysanaa xal kale:
1.- Como xidid waxaan abuureynaa feylka /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/55-myconf.pkla (haddii ay
waxaad dooran kartaa magac kale laakiin markasta waa inuu ku dhamaadaa .pkla).
2.- Waxaan ku darnaa waxyaabaha soo socda gudaha:
3.- Kadibna waxaan ku darnaa isticmaalaha kooxda DIIWAANKA. Haddii kooxdani aysan jirin, waxaan abuurnaa:
Kiiboodhka Caalamiga ah ee Ingiriisiga oo leh furayaal dhintay.
Si loo dhigo kumbuyuutarka Ingiriisiga furayaasha dhintay waxaan adeegsaneynaa amarkan, kaas oo aan ku ridi karno /etc/rc.local haddii aan door bidnay aan kaydsanayn markaan dib u bilawno kombuyuutarka:
Gaar ahaan, marwalba waan isticmaalaa noocyadan maxaa yeelay teebabka Ingiriisiga ayaa ii oggolaanaya inaan isticmaalo Ñ anigoo riixaya furayaasha. [AltGr] + [N].
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Tilmaamaha qaarkood ee LXDE
Gaar ahaan, marwalba waan istcimaalaa baddalkan maxaa yeelay teebabka Ingiriisiga ayaa ii oggolaanaya inaan isticmaalo Ñ anigoo riixaya furayaasha [AltGr] + [N].
Teebabka Cuba miyaanay lahayn have? Waa hagaag, maxaa yeelay dhammaan xarfaha waa lagama maarmaan
Oh hooyaday, wiilkan ... Keyboard-yada leh Ñ waa kuwa ku qoran Isbaanishka. Halkan kumbuyuutar badan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa Ingiriisi sidoo kale.
Haddii aad ku hadasho Isbaanish, ma aqaano sababta cadaabta aad ugu iibsaneyso Ingiriisiga, Isbaanishka waxaad ku qori kartaa labada luqadood adigoon u baahnayn dariiqyo gaaban, iyadoo Ingiriisiga uusan aheyn kaamarada
Wax walba miyay tahay in laguu macneeyo? Taasi aniga ma iibsan, waxaa iibsaday "qof" dowladda dibedda. Oo fadlan, yaanan dooddan ka dhigin hadda, macno malahan 😛
Kaalay, oohin u baro Kitty, way hubtaa inay ku raaxeyso, anigu kuma lihi taas hahaha
Si aad u qorto jilayaal sida <> \_ | Iyo kuwa kale, way ka adagtahay Isbaanishka (ugu yaraan aniga ahaan), waxaanna u isticmaalnaa jilayaashaas wax badan bash, Python ama si fudud terminaalka.
Waxaan ugu yeeraa Isbaanishka hahahahaha
waxaa ku jira teebabka af Isbaanishka oo leh furayaashaas », ¬, | »Sida kuwa aan qortay dhibaato la'aan.
Waxaan ka door bidaa kiiboodhka Ingiriisiga, taasi waa ... "sawirada yar" ee furayaasha ku jira siduu yahay, laakiin ku qor Ingiriisi sidaas oo kale, oo hadaan rabo ñ markaa Alt waana intaas.
Isbaanishka, hadaad eegto waxaan idhaahdo
Sidoo kale waa inaad ku sameysaa lahjadaha iskudhafyada muhiimka ah ee aan qiyaasayo, sax?
Nope, Waxaan riixaa ´] + [a] iyo voila, waxaan haystaa 🙂
In kasta oo aan waliba haysto fursad aan ku cadaadiyo [Alt] + [a] y = á 😀
Halkan Biljimka dulucda teebabadeedyadu waa dhibaato, halkii laga rabay «qwerty» caadiga ah waxaan leenahay «azerty» ... sidoo kale, tirooyinka waa inaad riixdaa furaha raasumaalka, oo xarafka weyn ee la riixayaa furayaasha oo dhan ay leeyihiin shaqo ka duwan (si aan loo xusin enyes iyo tildes) wadarta fowdada !! laakiin haye, waad la qabsaneysaa wax kasta ... guriga waxaan ku haystaa laptop-kii aan ka keenay Spain, shaqadana waxaan ku hayaa kumbuyuutarka «azerty» oo waxaan ku dhowahay inaan ku wareersanahay guriga marka loo eego shaqada hehehehe ayaan ku idhi, waa arrin tababar iyo caadooyinka 🙂
Taasi waa da ', taasi waa sababta aad u wareersan tahay
Waa inaan "la dagaallamaa" tan maalin kasta!
sifiican, Isniinta ilaa Jimcaha xDD
Tilmaamuhu aad ayey faa'iido u leeyihiin, laakiin Lxde waxaan u isticmaalaa Wdm maareeye fadhiga maxaa yeelay way ka fudud tahay. Waxaan sii wadaa inaan qalabkeyga ku dhajiyo kor u kaca dhibaatooyinka jira ee aan kala kulmayo maareeyayaasha faylka garaafka, waa wax laga xumaado in fd aysan iswada dhigin, haddii kale waxay noqon laheyd mid dhaafsiisan sidii hore.
Ikhtiyaarka (kan labaad ee boostadan) waxaad u isticmaali kartaa udisk inaad ku dhejiso:
ama sidoo kale waad dejin kartaa ikhtiyaarka qalabka otomaatiga markaad gelineyso pcmanfm.
laakiin waa maxay dhibaatooyinka maamulayaashaas garaafka ah?
Tilmaamahan ayay aniga igu soo dhacday inaan wax barto, si aan u arko waxa soo baxa.
Waxay sidoo kale ku dari karaan ikhtiyaarka lagu toogto "Screenshot" oo markii ugu horreysay naafo ku ah Openbox. Waxaan ka raadinayay internetka si aan u arko haddii aan ku sameeyay nooc ka mid ah casharrada qaabeynta qaabeynta qaab dhismeedka 'Webmin' oo loogu talogalay saaxiib kaas oo sidoo kale maamule ka ah shabakad waxaanan gartay in sanduuqa furan uusan lahayn asal ahaan. Tani waa waxa aan helay:
Marka hore waxaan sameynaa qoraal noo ogolaanaya inaan sameyno qabashada, taas oo ah helitaanka xididka waxaan ku abuureynaa qoraalkeena galka / usr / maxaliga / bin leh lambarkan:
qoraalka ayaa ku dhowaad "aan waxyeello lahayn" uun ku samee shaashadda shaashadda leh magaca "shaashadda" oo ay ku xigto taariikhda. Kadib markii qoraalkaas galka kujira waxaan siineynaa ogolaansho fulin:
ka dibna waxaan ka dhigi doonaa Openbox socodsiinta qoraalkaas mar kasta oo aan garaacno fure Daabac. taasna waxaan u fureynaa faylka qaabeynta Openbox ee ku yaal goobta ~ / .config / sanduuqa furan / lxde-rc.xml Faylkaasna dhexdiisa waxaan ka raadineynaa «Keyboard» -ka oo ah midka qaabeeya kiiboodhka halkaasna waxaan ku darnaa ikhtiyaarka ah in lagu fuliyo qoraalka farta Daabacista si ay ugu ridaan koodhkan qeybtaas:
Ka dib markaa waa inaan dib u qaabeyno sanduuqa furan:
Diyaar…. iyo maareeyaheena Openbox waa inuu awoodaa inuu jiido shaashadda. Tani waa mid ka mid ah xulashooyinka aan helay inkasta oo aad sidoo kale baari karto LXDE Wiki si aad u aragto waxyaabo badan
Waan ka xumahay, laakiin ma heli karo meel aan wax kaga beddelo qoraalladii aan dhigay, markaa waa inaan raalli-geliyaa oo aan kuu sheegaa in koodhka lagu dhejinayo qaybta keyborad uu yahay sidan:
si sax ah maahan
…. waan ka xumahay inay ahayd maskax marinta
Waad salaaman tahay, sidee baan ugu dulmari karaa shaashadda helitaanka lubuntu haddii ay suurtagal tahay, taasi waxay ka mid ahayd waxyaabihii aan ka helay Ubuntu 9,04. haddii qof ogyahay sida aan ugu rakibi karo mawduucyada shaashadda soo galitaanka waan ku qanacsanahay
Jawaab José Daley Alarcón Rangel
Intee in le'eg ayaa ku dhibban xarafka Ñ ama ñ iyo teebabka Ingiriisiga? haddii ay ku filan tahay in loo qeexo kumbuyuutarka sida Isbaanishka waqtiga rakibidda.
Xaqiiqdii xilligan waxaan ka sameeyaa kiiboodhka Ingiriisiga ee loo qaabeeyey Isbaanish.
Hagaag, waxaan u adeegsadaa noocyada kala duwan ee Caalamiga ah ee Mareykanka ee leh Furaha Furaha ee kumbuyuutarka oo ku dhaji and isku darka AltGr + N
Waad salaaman tahay, iga raali noqo, ma jiraa qof iga caawin kara inaan u beddelo asalka cad ee PCmanFM sawir ahaan maxaa yeelay waxaa lagu sameyn karaa Nautilus, wax badan baan ka baaray internetka laakiin ma aanan helin dariiqa, mana garanayo feylka wax laga beddelo . Waxaan isticmaalaa Fedora 16 LXDE, mahadsanidiin kahor waana ka xumahay dhibaatada. Salaan.
Waad salaaman tahay, DEBIAN WHEEZY, gnome 3, waxaa jira xal in wax walba laga furo oo aan la xannibin nidaamka, markii nidaamka dib loo bilaabayo ama la xidhayo, waa in meel la dhigaa - a, kahor bixitaanka ama dhamaadka safka feylka in / etc / gdm3 / PsotSesion / default sida lagu sameyn lahaa LXDE ama lingthdm.
rakibi DEBIAN WHEEZY, oo leh LXDE asal ahaan rakib ligthdm, si aad u xalliso u rakib gdm3, laakiin waxay ku rakibtaa codka maqalka ee maqalka, oo aanan rabin.
Ku jawaab luchosystema
Waxaan rabaa inaan sawir qaas ah ku dhajiyo lubuntu markay bilaabaneyso, waxaan rabaa inaan u habeeyo xoqda ... miyaad ogaan laheyd sida? mahadsanid
HTC One X, Falanqeyn Qotodheer